Munaasabad Loo Qabtay Guulihii Ciidanka LYP ay kasoo Hoyiyeen Ladagaalanka Al-qushaash - Cakaara News
Munaasabad Loo Qabtay Guulihii Ciidanka LYP ay kasoo Hoyiyeen Ladagaalanka Al-qushaash
Godey(CN) Jamce, 25ka September 2015, Munaasabad hal-kudhag looga dhigay ''halganka tirtirida argagixisada iyo saboolnimada waa mid aan dhidibada ugu aasayno horumar waara oo aan soo noqosho lahayn'' oo si balaadhan oo heer sare ah loo soo agaasimay oo aysan xukuumada DDSI iyo saraakiisha sare ee ciidamada qaranka koonfur bari itoobiya ukalahadhin oo loo qabtay guulihii ciidanka gaarka ah kasoo hoyiyeen ladagaalanka argagixisada al-qushaash ayaa maanta kaqabsoontay hoolka wayn ee kuliyada beeraha magaalada Godey.
Bilowgii munaasabadan ayaa waxaa hoolka gil-gilay kooxda muusiga iyo madadaalada ciidanka qaranka koonfur-bari iyo kooxaha deegaankaba. iyadoo kooxda ciidanka qaranku ay halkaas ku soo bandhigay hees aan inaba caadi ahayn oo laxan iyo luuqba loo dhamaystiray si gaar ahna uga turjumaysa waxqabadka iyo kartida geesinamada leh ee ciidanka gaar ka ah ee deegaanka iyo xukuumaduba soo hoyiyeen.
Furitaankii munaasabadan ayaa waxaa khudbad dhaxal gal ah oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay jananka ciidanka gaar ka ah ee DDSI mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Buraale. wuxuuna si qoto dheer uga warbixiyay sooyaalkii taariikheed ee deegaanka laga soo bilaabo 1983TI isaga oo tilmaamay in ayna dawlad nimo hore uga jirin deegaanka magac u yaal mooyee marka laga reebo 5tii sano ee ugu danbaysay oo ay nabadgalayda iyo horumarkuba hanaqaadeen. wuxuuna jananku ugu danbayn balan qaaday in ay sii wadayaan dagaalada ay kula jiraan argagixisada alqushaash iyaga oo kaashanaya ciidamada qaranka, difaaca shacabka dalka, deegaanka iyo dalalka kaleba, ilaalinta dastuurka dalka, deegaanka iyo ku dhaqanka sharciga.
Dhanka kale, jeneralka ciidanka difaaca qaranka qaybta koonfur-bari litoobiya lieutinent general Abraham Wolde-mariam ayaa isna madashaasi ka soo jeediyay khudbad ku qotonta geesinimada ciidanka gaarka ah ee deegaanku leeyihiin. isagoo halkaasi ku gudoonsiiyay abaalmarin sharafeed iyo bilad geesi. waxaa intaa dheer, in jananku gudoonsiiyay Madaxwayne ku-xigeenka ahna wasiirka Waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan shahaado tilmaamaysa balanqaad isKuul dugsi hoose ah oo uu ciidanka qaranka qaybta koonfur bari ka dhisi doono deegaanka.
Madaxwaynaha DDSi mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa madashan ka soo jeediyay khudbad dheer oo muhiimadeedu tahay in guulaha munaasabadan loo qabtay ay yihiin kuwo ay ka danbeeyeen ciidamada qaranku maadaama oo ciidanka gaar ka ahi yahay midhihii ciidanka qaranka isaga oo si wayn ugu mahad celiyay madaxwaynuhu sidii meeqaamka sare lahayd ee ay ciidamada qaranku ugu soo gardaadiyeen uguna adkaysteen nabad kadhalinta deegaanka ee wakhtiga dheer. madaxwaynaha ayaa hadalkiisa sii raaciyay in ciidanka federal boolisku ay iyaguna kaalin mug leh kaqaateen hirgalinta nabadgalyada. Sharafna mudan yihiin. wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in cadawgeena koobaad ee maanta yahay saboolnimo. saboolnimada aan si dhaw uga bixi karno maadaama oo aan haysano dhul iyo biyo baaxad leh oo aan intaan inagu isku filaano aan deeq gaadhsiin karo wadamada kale ee caalamka taasi oo isla xisaabtankeenu noqon doono in rijminti kasta lagu qiimeeyo hada ka dib wax soo saarka beeraha. isagoo hadalkiisii kusoo xidhay in xukuumadani tahay kabaha ay shacabku kaxidhaan gacandhida.
Ugu danbayntii, odayaasha deegaanka ayaa madashan kugudoonsiiyay xubno tira yar oo ku soo dhaawacmay dagaaladii alqushaash deeq lacageed. xafladan oo cadaan iyo madawba cayaarsiisay ayaa kusoo xidhantay farxad wada raaligalisay hoolka.